Ciidamada Amisom oo duqeyey Deegaanka Ceel Cambuulo ee Gobolka Galgaduud – STAR FM SOMALIA
Wararka inaga soo gaaraya Gobolka Galgaduud, ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya Madaafiic ay ku garaaceen deegaan la sheegay inay ku sugnaayeen Ururka Al Shabaab.
Deegaanka Madaafiicda ay ku garaaceen ciidamada Itoobiya ayaa lagu magacaabaa Ceel Cambuulo, wuxuuna ku dhaw yahay deegaanka Ceelgaras oo ka tirsan Gobolka Galgaduud, ciidanka Itoobiya ee ku sugan deegaanka Ceelgaras ayaa madaafiicda halkaasi ka tuuray.
Wararka ayaa sheegaya in xilliga ciidamada Itoobiya madaafiicda ay ku garaacayeen deegaanka Ceel cambuulo shir uu uga socday Al Shabaab, gaar ahaan waxa ay ku shirayeen Koontarool ku yaallo deegaankaasi, sida wararka ay sheegayaan.
Ilaa hada si rasmi ah looma oga khasaaraha dhabta ah ee ciidamada Shabaab kasoo gaaray duqeyntaasi madaafiicda ah ee ciidamada Itoobiya ay ku garaaceen deegaanka Ceel Cambuulo oo Shabaab ay ku shirayeen.
Waxaan sidoo kale la ogeyn waxa ay ka shirayeen Shabaabka ku kulansanaa deegaanka Duqeynta ay ka dhacday.
Dadka deegaanka Ceel Cambuulo waxa ay soo warinayaan in Al Shabaab ciidan badan ay geeyeen Koontaroolka ku yaalla duleedka deegaanka, inkastoo aan la ogeyn ujeedka ay kaga gol lahaayeen ciidamadaasi ay geeyeen Koontaroolkaasi.
Ciidamada Itoobiya oo qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee Amisom ayaa baacsanaya Al Shabaabka ku sugan deegaanada Gobolka Galgaduud, waxaana wararka saaka laga helaayo Gobolkaasi ay sheegayaan in ciidamada Itoobiya dhaqdhaqaaq ciidan ay ka wadaan duleedka deegaanka Ceelgaras.
Al Shabaab iyo Saraakiisha ciidamada Dowladda intaba kama aysan hadlin duqeyntaan la sheegay in xalay lagu garaacay deegaanka Ceel Cambuulo oo Shabaab ay ku kulan